Nagu saabsan - Binzhou Chengli Dhismaha Qalabka Co., Ltd.
Binzhou Chengli Dhismaha Qalabka Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa muuqaalka quruxda badan ee Yellow River Delta Center City-Binzhou, waqooyiga Shiinaha. shirkaddayadu waxay si xirfad leh ugu takhasustay geedi socodka wax soo saarka, cilmi baarista, horumarinta, iyo iibinta qaanso la taaban karo.
Binzhou Chengli Dhismayaasha Qalabka Co., Ltd. waxay ku fadhidaa aag dhan 38.53 mu, oo leh 25086 mitir murabac oo goobta dhismaha ah iyo 600 mitir murabac oo loogu talagalay cilmi baarista sayniska iyo shaybaarka. waxaan dhisnay khadka waxsoosaarka shaybaar dhameystiran, falanqaynta kiimikada iyo shaybaarka hantida jirka ee Jaamacadda Shandong, oo lagu qalabeeyay aalado casri ah oo lagu cabbiro laguna tijaabiyo aaladaha iyo qalabka ballaaran.
Shirkadayadu waxay leedahay koox cilmi baaris iyo horumarineed oo ka kooban dhakhaatiir xirfadlayaal ah, sayidada jaamacada Shandong wax soo saarkayada ugu muhiimsan: polycarboxylate superplasticizer dareere iyo budo, sodium naphthalene sulfonate formaldehyde, superiplasticizer aliphatic, sodium / calcium lignosulfonate, sodium gluconate, antifreeze, accelerator, defoamer , wakiilka hawada gala, iwm.
Binzhou Chengli Dhismaha Qalabka Co., LTD had iyo jeer waxay u hoggaansamaan tayada sida aasaaska, hal-abuurnimada sida awoodda, waxayna ku dadaalaysaa inay la mid noqoto hoggaamiyaha warshadaha lagu daro. Daacadnimada shirkadeena, xooggeeda iyo tayada wax soo saarkuba waxay helayaan aqbalaad warshadeed Maareeyaha guud iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda waxay soo dhaweynayaan asxaabta ka socota dhammaan qaybaha nolosha si ay u soo booqdaan, hanuuninta iyo gorgortanka ganacsiga.